We get frustrated when things do not go as well as we planned. No matter how hard we work, no matter how hard we try, how much we plan or how badly we want it, we are not living up to our dreams. Asaresult, we jump into the wrong conclusion by blaming our destinies for not being fortunate enough or lucky enough. However, the biggest obstacle to success is probably OURSELVES. We might not want to admit it but that’s most likely one of the reasons why we still haven’t achieve
အင်္ဂလိပ်​စာသည် နိုင်​ငံတကာသုံးဘာသာရပ်​ ဖြစ်​ပြီး ယခု​ခေတ်​တွင်​ လူတိုင်းအလိုလိုပင်​ အင်္ဂလိပ်​စာကို ဘုံဘာသာစကား အဖြစ်​အသုံးပြုလာသည်​ကို မြင်​​တွေ့နိုင်​ပါသည်။ ထို့​ကြောင့်​လည်း အင်္ဂလိပ်​စာ၏ အ​​ရေးပါပုံကိုအနက်​အမျိုးမျိုး ဖွင့်​ဆိုခဲ့ကြပြီး ယခု​ခေတ်​အခါတွင်​လည်း အင်္ဂလိပ်​စာကို မရှိမဖြစ် ​လေ့လာထားသင့်​​သော ဘာသာရပ်​အဖြစ်​ သတ်​မှတ်​ထားကြပါသည်။ ကျွန်​မလိုပင် မြန်​မာပြည်​မှ ​ကျောင်းသူ ​ကျောင်းသား အများစုသည်​ အင်္ဂလိပ်​စာကို ​ရေးတတ်​ ဖတ်​တတ်​​နေ ကြပါသော်​လည်း ​ပြောထွက်​ရန်​ အလွန်​ပင
ကျွန်မတို့ လူသားများသည် နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေသော လှုပ်ရှားမှု အရာများအားလုံး ကိုသတိထားခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများလုပ်ဖို့သေချာမလေ့ကျင့်ထားဘူးဆိုလျှင် ခဏတာလေးအတွင်းမှာ မေ့သွားမှာပါ။ ထိုနည်းတူစွာ သင်ကြားခြင်းပုံစံသုံးမျိုးဖြစ်သော အသံနှင့် သင်ယူသူ၊ အကြားဖြင့်သင်ယူလိုသူနှင့် လှုပ်ရှားမှုတို့ ဖြင့်သင်ယူလိုသူများ ဟူ၍ရှိရာ သင်ယူလေ့လာသူများအနေဖြင့် ထိုသင်ကြားခြင်း သုံးမျိုးမှ ပထမဦးစွာ မိမိသည် မည်သို့သော သင်ယူသူအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သိရပါမည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် မိမိအားသာသော သင်ယူသူအမျိုးအ
"I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside."_ Whitney Houston Children, who will become the youthful leaders of tomorrow, are the future of Myanmar. Depending on how we educate and nurture them will determine how largearole they play in the resurgence of this country. People in the administrative fields of Myanmar should be aware of this and start making investments to ensureagood educati